Phantsi kwemeko yobhubhane, inkampani yaphuhliswa ngendlela enocwangco
ngomphathi ku 21-03-09
Kumsitho wokufika kwentwasahlobo entsha ngonyaka ka-2021, ukuqhambuka kwesifo esitsha sesithsaba kwindawo yethu kubangele ukwanda ngokukhawuleza kwentsholongwane kwaye kwabangela ukothuka phakathi kwabantu. Urhulumente waphendula ngokukhawuleza kwaye waphumeza umgaqo-nkqubo wokutywina isixeko phantsi kolawulo olungqongqo. Abasebenzi be ...
Shijiazhuang Sunline Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd.
Inkampani yethu yiShijiazhuang Sunline Import & Export Trading Co, Ltd.Sinendawo efanelekileyo yokuhlala, ineminyaka eli-13 yembali, ukusukela ekusekweni ukuza kuthi ga ngoku ngokuthe ngcembe siphucula intsimi nganye, ukusuka kwimveliso enye engaphandle, ukuya kwiindidi zemveliso zanamhlanje bezingacacanga. ...
Ubomi bemihla ngemihla ngo-2020
ngomphathi ku 20-12-22
Kwi-begining2020, ubhubhane omtsha utshabalalise ilizwe liphela, kwaye abantu bayanyanzelwa ukuba baphumle emakhaya. Inkampani yethu nayo yanyanzelwa ukuba iyeke umsebenzi kangangexesha elithile. Ngo-Matshi, emva kokuba urhulumente ekhuphe umgaqo-nkqubo wokuqalisa kwakhona, inkampani yethu yaya ngokungxamisekileyo kwiinkqubo zokwenza umsebenzi kwakhona. Ngaphezulu ...